ကော်စတာရီကာကို ခရီးသွားတဲ့အခါ | ခရီးသွားသတင်း
ကော်စတာရီကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, ကော့စတာရီကာ
Central America သည် သဘာဝ၊ ပင်လယ်နှင့် အကောင်းဆုံးသောကမ်းခြေများကို တွေ့ကြုံခံစားလိုသူများအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ကြီးကျယ်သော ခရီးသွားနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာ ကော့စတာရီကာဤနှစ်များကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၎င်း၏တံခါးများကိုဖွင့်ကာ လာရောက်လည်ပတ်သူများကို စောင့်မျှော်နေသည့် သဘာဝပရဒိသုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ... ကော်စတာရီကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ။
2 ကော်စတာရီကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ။
ကော်စတာရီကာသမ္မတနိုင်ငံသည် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဗဟိုအမေရိကတွင်တည်ရှိသော သမ္မတနိုင်ငံပြည်နယ်ခုနစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး လူငါးသန်းခန့်နေထိုင်သည်။ ကိုလံဘတ်စ်သည် ၁၅၀၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဤနေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်း၏ စတုတ္ထမြောက် ခရီးစဉ်အတွင်း ၎င်း၏မြို့သူမြို့သားများ၏ ရွှေစည်းစိမ်သည် နယ်မြေသည် အတိအကျ… ကြွယ်ဝသည်ဟု ယုံကြည်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အမည်၏ ယူဆချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဂွာတီမာလာ၏ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး၏ မှီခိုမှု၊သူ၏တိုင်အောင်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၁၈၂၁ တွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။. အမှန်တရားမှာ ဤလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံငယ်လေး၏သမိုင်းသည် ၎င်း၏ကျန်အိမ်နီးချင်းများနှင့် ဆင်တူသည်- ကိုလိုနီစနစ်၊ လွတ်လပ်ရေး၊ အမေရိကန်ကို မှီခိုအားထားမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် အမြဲတစေ ဆိုးရွားသောရလဒ်များနှင့်အတူ အမြဲတမ်းရောင်းအားကောင်းသော နီယိုလစ်ဘရယ်စီးပွားရေးပုံစံကို ကျင့်သုံးသည့်အခါ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ .
ကော့စတာရီကာ ပြည်နယ် ခုနစ်ခု ခွဲထားပါတယ်။. Central America ၏ isthmus နှင့် တွင် တည်ရှိသည်။ ကာရေဘီယံပင်လယ်နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် ကမ်းခြေတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းများမှာ နီကာရာဂွာ၊ ပနားမားနှင့် အီကွေဒေါနှင့် ကိုလံဘီယာတို့ဖြစ်သည်။ အမှန်က နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရမ်းကုန်းတယ်။အမြင့် 900 နှင့် 1800 မီတာကြားရှိ တောင်ထိပ်များနှင့် ပင်မတောင်တန်းလေးခုနှင့် အခြားအလယ်တန်းတောင်တန်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၃၈၂၀ မီတာမြင့်သော Chirripó တောင်သည် တိုက်ကြီး၏ ဤအစိတ်အပိုင်းတွင် အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သည်။
၎င်းတွင် လှုပ်ရှားနေသော မီးတောင်များနှင့် ကျွန်းများစွာရှိသည်။. ကာရေဘီယံပင်လယ်တွင် ဥပမာအားဖြင့် Uvita ကျွန်းနှင့် Calero ကျွန်းတို့ရှိပြီး ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင် Nicoya ပင်လယ်ကွေ့ရှိ ကျွန်းစုများ၊ Tortuga ကျွန်း၊ Cocos ကျွန်း၊ Caño ကျွန်းနှင့် အခြားများစွာသောကျွန်းများဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကြီးမားသော ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများသည် ၎င်းအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်အဖြစ် ရရှိခဲ့သည်။
ကော်စတာရီကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အားလုံးလိုလိုပါပဲ။ covid19 ကပ်ရောဂါ သူမကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါ မိုးရွာတာ၊ လူစုလူဝေး ဒါမှမဟုတ် အပူဒဏ်ကို ရည်ညွှန်းခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ကပ်ရောဂါကို ရှောင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဤအခြေအနေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အန္တရာယ်များနှင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ထိုအကြောင်းကြောင့် ၎င်း၏ပြည်တွင်းသို့ ရောက်ရှိလာသော ခရီးသွားများအတွက် ခေတ်မီပြီး အခမဲ့ ကျန်းမာရေးစနစ်ကို ထားရှိခဲ့သည်။ 2020 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစတင်၍ နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များဝင်ရောက်နိုင် ဒါကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း တကယ်ပဲ ပိတ်ခဲ့တာ။ ထို့နောက် quarantine နှင့် စမ်းသပ်မှုများ မလိုအပ်ပါ။
ဒါဆို ဘယ်အချိန်မှာ Costa Rica ကို သွားသင့်လဲ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ရေပန်းအစားဆုံးအချိန်က ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကူးကာလတွေမှာ ကျရောက်တဲ့ အထွတ်အထိပ် အားလပ်ရက်ရာသီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းရှောင်တာက အမြဲတမ်း ပိုကောင်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်လောက်ကြာရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ လူနည်းနည်းပဲ ရှိတယ်။
ကော်စတာရီကာတွင် မိုးရာသီသည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကုန်ဆုံးသည်။ သို့သော် နေ၏ စွမ်းအား ခမ်းခြောက်ပြီး ကမ်းခြေများပေါ်တွင် နေရောင်ခြည် ထွန်းလင်းလာသောအခါ နှစ်သစ်ကူးအထိ တောတောင်များသည် စိုစွတ်နေသေးသည်။ အမှန်က ဤသည်မှာ တစ်နှစ်တာ၏ အကောင်းဆုံးအချိန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် အပူပိုင်းဒေသမျိုးစိတ်များဖြစ်သည့် မျောက်နှင့် မျောက်များသည် မြောက်မှရောက်လာသော ရွှေ့ပြောင်းငှက်များ၊ ပူနွေးသောရေ၌ မွေးဖွါးလာသော ကျောကုန်းဝေလငါးများနှင့် ပင်လယ်လိပ်များ ပေါက်ပွားနိုင်သည့် ပင်လယ်လိပ်များ ပါဝင်သောကြောင့်၊ ကမ်းခြေ။
တော်တော်များများအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်က ဒီအချိန်မဟုတ်ပေမယ့် ဇူလိုင်လနဲ့ သြဂုတ်လ။ မိုးပိုရွာပေမယ့် လာရောက်လည်ပတ်သူနည်းပြီး ဈေးနှုန်းလည်း ပိုကောင်းတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ရေတစ်စက်ကို မလိုချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် အရမ်းနည်းနေရင် ဝင်ရမယ်။ ကာရေဘီယံတွင် ခြောက်သွေ့ရာသီသည် စက်တင်ဘာလမှ အောက်တိုဘာလအတွင်းဖြစ်သည်။
သင်တွေ့ဖူးသည့်အတိုင်း ကော်စတာရီကာသို့ အလည်အပတ်သွားရန် အချိန်မဆိုးပါနှင့် အမှန်အတိုင်းပင် အားလုံးက သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သင်၏ဦးစားပေးများ။ နှစ်လယ်မှာ အချိန်ရရင် ပိုကောင်းတဲ့ အချိန်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ လကိုရွေးပြီး ရာသီဥတုက ဘယ်လိုလဲ၊ မိုးဘယ်လောက်ရွာလဲ၊ ဘယ်လိုတိရိစ္ဆာန်တွေ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လဲဆိုတာနဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝက ဘယ်လိုလဲ (ပွဲတော်တွေ၊ အားလပ်ရက်တွေ စသည်ဖြင့်) ကြည့်လိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်က အကောင်းဆုံးရာသီဥတုလဲ။ နေရာပေါ် မူတည် ငါတို့ပြောနေတာ။ အမှန်တရားက ကော်စတာရီကာတွင် microclimate အများအပြားရှိသည်။ တစ်ခုက ရေကြီးနေချိန်၊ နောက်တစ်ခုက ဆာဟာရထက် ပိုခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် မိုးအနည်းငယ်ရွာသောရာသီတွင် ခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ "အစိမ်းရောင်ရာသီ" (မေလမှ နိုဝင်ဘာလအထိ)။ တိုင်းပြည်မှာ ဆောင်းရာသီဖြစ်မယ်- ခရီးသွားမရှိ၊ ဈေးလည်းနည်းပြီး တောင်စောင်းတွေက စိုစွတ်နေပေမယ့် နေ့ရက်များသည် အလွန်နေသာသည်။
သို့တိုင်၊ ဤအချိန်သည် ၎င်း၏အားနည်းချက်များလည်း ရှိနိုင်သည်- အချို့သောဒေသများသည် အထူးသဖြင့် အတ္တလန္တိတ်အပိုင်းနှင့် အနောက်တောင်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် အမှန်တကယ် စိုစွတ်နေပါသည်။ Osa ကျွန်းဆွယ်မှာ မိုးတွေအရမ်းရွာနေပြီး စက်တင်ဘာလနဲ့ အောက်တိုဘာလတွေမှာ တည်းခိုစရာနေရာတော်တော်များများ ပိတ်ထားတာကြောင့် သိလာရတာက ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ အီကွေတာနှင့် နီးသောကြောင့် ဤနေရာတွင် နွေရာသီညများ ပိုကြာသောကြောင့် အနည်းငယ်မှောင်နိုင်သည်။ သင့်အတွက် ကော်စတာရီကာသည် နေနှင့် တူညီပါက ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ နှင့် မတ်လတို့တွင် သွားရမည်။
ပစိဖိတ်ဘက်ခြမ်းမှာ၊ စိုစွတ်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီအကြောင်းပြောရင် နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Nicoya၊ Guanacaste အကြောင်း ပိုပြီးပြောပါမယ်။ ကျန်ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းသည် တောင်ထူထပ်ပြီး ယေဘူယျမိုးရွာသွန်းမှုပုံစံများအတိုင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ၊ အရှေ့ဘက်၊ ကာရေဘီယံဘက်ခြမ်းတွင်၊ ရာသီပေါ် မူတည်၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုပြင်းထန်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး မိုးပိုရွာတတ်သည်။ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလများတွင် ဤစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး ကျန်နိုင်ငံများတွင် မိုးများသော်လည်း ကာရေဘီယံကမ်းခြေများသည် ခြောက်သွေ့၊ နေသာပြီး ပူနွေးနေဆဲဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောနှင့်နိမ့်သောခရီးသွားရာသီများသည်အပန်းဖြေစခန်းများတည်ရှိရာပစိဖိတ်ဘက်ခြမ်းတွင်မိုးရွာသွန်းမှုပုံစံများကိုလိုက်နာသည်။ ဇန်နဝါရီမှ မတ်လအထိ ခြောက်သွေ့ရာသီသည် လူအများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ဈေးကြီးသည်။ အမှန်ပင် အထွတ်အထိပ်ရာသီသည် ခရစ္စမတ်မတိုင်မီမှ နှစ်သစ်ကူးပြီးနောက် နှစ်ပတ်ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးအရာမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာသီဥတုဖြစ်သော်လည်း ဈေးနှုန်းများမဟုတ်ပေ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန် ခက်ခဲသည်၊ လူများလွန်းပြီး ကမ်းခြေများတွင် လူများသည်။ မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းက လူတွေအကုန်လုံး အအေးလွန်ကဲပြီး နှင်းတွေကျလို့ ထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ တွေးကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » ကော့စတာရီကာ » ကော်စတာရီကာကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ
Catalonia ရှိ အလှဆုံးရွာများ